By Htet Wai Aung - June 28, 2017
ကျွန်တော် ဒီဟာလေးကို သဘောကျတယ်ဗျာ။ font တစ်ခုချင်းဆီကို font design style လေးတွေ ကြည့်လို့ရအောင် feel လို့ရအောင် ဆွဲပေးထားတာ http://kaunghtet.xyz/beautiful-burmese-type/
ကွန်ပျူတာနဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ IT Gadget တွေမှာ မြန်မာစာသုံးဖို့ စနစ် နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ဥပမာ ကြက် လို့ရေး မယ်ဆိုရင်… ကကြီး ရရစ် ကသတ် ကြက် လို့ရေးမလား... ရရစ် ကကြီး ကသတ် ကြက်လို့ ရေးမလား... ဘယ်ဟာ အမှန်လဲ။ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံအတိုင်း အမှန် မရေးသင့်ဘူးလား.. မရေးချင်ဘူးလား။ မြန်မာစာရေးရာမှာ ရရစ်မှာ အသေး နဲ့ အကြီး ရှိပါတယ်။ ခကွေးအတွက် ရရစ်က အသေးပါ..။ ဥပမာ. ခြ.. ဒီလို ခြ … မရပါဘူး...။ ကကြီးအတွက် ရရစ်က အကြီးပါ..ဥပမာ ကြ… ဒီလို...ကြ..မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နှစ်ခုလုံးဟာ ရရစ်ပါပဲ..။ လုံးကြီးတင်ပါတဲ့ ရရစ် မပါတဲ့ ရရစ်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အောက်မြစ် ၀ ဆွဲတွေပါ ရင်လည်း ရရစ်က ပုံစံပြောင်းပါတယ်။ စာရေးတဲ့အခါ ရေးထုံးအမှန်ဖြစ်ဖို့ အဲဒါတွေကို တစ်ခုချင်းလိုက်ရွေးပြီး ရေးချင်သလား….။ အဲ့ဒါတွေ လိုက်ရွေးနေစရာမလို.. ရရစ်တစ်မျိုးပဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရေးတဲ့ စာလုံးပေါ်မူတည်ပြီး အကြီး အသေး အော်တိုပြောင်းတယ်။ အဲ့ဒီလိုပဲ အောက်မြစ်ကလည်း စာလုံးပေါ်မူတည်ပြီး အနေအထား သုံးမျိုး လောက်ရှိပါတယ်။ နှစ်ချောင်းငင် တစ်ချောင်းငင်တွေလည်း အတို အရှည်တွေ ရှိကြပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို စဉ်းစားနေစရာမလို.. ဘယ်ဟာနဲ့မှသင့်တော်မယ် တွေးနေစရာမလိုပါဘဲ
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး လန့်မသွားပါနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေ ရေးမှာပါဗျ။ ဘာသာစာပေတစ်ခုဆိုတာနဲ့ ဗျည်းနဲ့ သရရယ်လို့ ၂ မျိုးရှိတာ သိထားကြပြီးသားပါ။ အင်္ဂလိပ်စာမှာတော့ ရိုးရှင်းတယ် ဗျည်း သရတွေဟာ ရှေ့နောက်စဉ်ထားတယ်လေ။ မြန်မာမှာတော့ နည်းနည်းရှုပ်သဗျ။ သရကို သင်္ကေတအနေနဲ့ ဗျည်းကို သွားပေါင်းရတယ်။ Complex script လို့ခေါ်တာပေါ့။ အားတော့မငယ်နဲ့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းတော့ မဟုတ်ဘူး ဒေဝနာဂရီ အပါအဝင် အိန္ဒိယ၊ အာရှ အက္ခရာတွေမှာ complex script တွေ အများကြီးပဲ။ အခုတော့ မြန်မာ အကြောင်းပဲ ပြောကြတာပ။ မြန်မာသရကို ၁၁ လုံးရှိတယ်လို့ ပညာရှိတွေဆိုကြတယ်။ (၁၂ လုံးရှိတယ်လို့ သိထားကြတာလဲ ရှိမှာပါ။ ဆက်ဖတ်ရင် ရှင်းသွားမှာပါ) "အ၊ အာ၊ ဣ၊ ဤ၊ ဥ၊ ဦ၊ ဧ၊ အဲ၊ ဩ၊ ဪ၊ အို" ရယ်လို့ သရ ၁၁ လုံးပါတယ်။ မြန်မာ သရတွေမှာ လုံးချင်းသရ ဗျည်းယှဉ်သရလို့ ရေးနည်း ၂ မျိုးရှိတာလဲ သိကြမှာပါ။ ဣ၊ ဤ၊ ဥ၊ ဦ၊ ဧ၊ ဩ၊ ဪ ဆိုတဲ့ သရ ၇ လုံးဟာ ဗျည်းနဲ့ ယှဉ်တွဲရင် ိ၊ ီ၊ ု၊ ူ၊ ေ၊ ော၊ ော် ဆိုပြီး သင်္ကေတအနေနဲ့ ရေးရတယ်။ အ 'အ' သရဟာ အလွန်အင်မတန် ရှုပ်ထွေးပွေလီတဲ့ သရပါ။ ဒီလိုဗျ အ သရဟာ ဗျည်းတွေနဲ့ပေါင်းရင် မမြင်ရဘဲ ပျောက်နေတယ်ဗျ။ က ဆိုတာနဲ့ 'က'ဗျည်းနဲ့
MUA Office ဖောင့် ကို ဖောင့် ဖန်တီးသူ ကိုခွန်စိုးဇော်သူ မှ ပြုလုပ်ပေးထားပါသည်။ ရုံးသုံးဖောင့် ဖြစ်သော Myanmar3 ဖောင့် ဒီဇိုင်းနှင့် အနီးစပ်ဆုံး တူအောင် ဖန်တီးထားပြီး Adobe ထုတ်ကုန်များတွင်ပါ အသုံးပြုနိုင်အောင် ဖန်တီးထားပါသည်။ MUA Office ဖောင့်ကို မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခွင့်ပြုချက် မရှိပဲ ပြင်ဆင်ခြင်း မြန်မာယူနီကုဒ် စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီသော ဖောင့်အဖြစ်ပြုပြင် အသုံးချခြင်း အထက်ပါ အချက်နှစ်ချက်မှ လွဲ၍ CC-BY-ND-4.0 License ဖြင့် အသုံးပြုခွင့် ပေးပါသည်။ Credit ပေးခြင်းသည် မူလဖန်တီးသူ၏ အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုအား အသိအမှတ် ပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ MUA Office ဖောင့် အား ဒီလင့် ကနေ ဒေါင်းယူနိုင်ပါသည်။
ယူနီကုဒ်အကြောင်းပြောရင် စာရိုက်နည်းလဲ ချန်ထားလို့မရပါဘူး။ ယူနီကုဒ်မှာ စာရိုက်နည်း ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ Smart keyboard ပေါ့။ မြန်မာသင်ပုန်းကြီးရိုက်သလိုပဲ ရိုက်ရတော့ ခက်အခဲမရှိပါဘူး။ ဝင်းလို ရရစ်ကို ရှေ့ကရိုက်စရာမလိုပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက logical order နဲ့ရိုက်တဲ့နည်းပါ။ ဒီစနစ်မှာ ဗျည်းသံ သရသံတွေကို ခွဲခြားသိရင် ပိုပြီး လွယ်ပါတယ်။ စရိုက်ရင် သဝေထိုးက ပြဿနာပေးတယ်။ မြန်မာတွေရေးရင် သဝေထိုးရှေ့ကရိုက်ကြတာ ဘာလို့ ယူနီကုဒ်မှ နောက်ကရိုက်သလဲ မေးစရာရှိပါတယ်။ ရှေးဦးစွာ စကားသံတစ်ခုမှာ ဗျည်း၊သရ တွဲပြီးမှ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဝဏ္ဏတစ်ခု(စကားသံတစ်ခု) မှာ အဓိက ပြောရရင် ဗျည်း ပြီးမှ သရလာရပါတယ်။ ကာ ဆိုတဲ့ အသံရဖို့ က+အာ>ကာ ရယ်လို့ ဗျည်းနဲ့သရ ပေါင်းစပ်ရပါတယ်။ ကိ ဆိုတဲ့ စကားသံဆိုရင် က+အိ>ကိ လို့ရပါမယ်။ မြန်မာစာမှာ သဝေထိုးပါတဲ့ သရသံ ၃ ခုရှိပါတယ်။ အေ၊ အော၊ အော် ပါ။ ကောင်းပြီ ဗျည်းပြီးမှသရလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကေ ဆိုရင် က+အေ>ကေ လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကော= က+အော>ကော၊ ကော်= က+အော်>ကော် ဖြစ်ပါတယ်။ သဝေထိုးဟာ ရေးရင် အရှေ့ကရေးပေမယ့် အသံအရ နောက်ကပဲ နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သဒ္ဒဗေဒအရ ယူနီကုဒ်မှာ သဝေထိုးေကို ဗျည်းန
ကွန်ပြူတာအတွက်ကတော့ Text Converter တင် မကဘဲ စုစုပေါင်း သုံးမျိုးပေါင်းပေးထားပါတယ်။ 1. Text Converter 2. Filename Converter 3. MP3 Tag Converter ၁။ အတွက်ကတော့ ပြောဖို့ မလိုလောက်တော့ပါဘူး။ APK နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ မပါတာဆိုလို့ Image ဖိုင် ပြောင်းတာပါပဲ။ ၂။ Folder လိုက် ရွေးပြီး Folder ထဲမှာ ပါသမျှ file တွေကော folder တွေကော Zawgyi ကနေ Unicode အဖြစ် အကုန် ပြောင်းခိုင်းလို့ ရပါတယ်။ Auto detect ကို On ထားရင် ဇော်ဂျီလို့ ယူဆရတဲ့ ဖိုင်တွေပဲ ပြောင်းပါလိမ့်မယ်။ ရွေးထားတဲ့ folder ထဲမှာ ရှိသမျှ အကုန် ပြောင်းပေးနိုင်တာမို့ အဆင့် ဘယ်နှဆင့် ဆင်းမလဲ ဆိုပြီး Level ရွေးပေးလို့ ရပါတယ်။ Level2ရွေးထားရင် လက်ရှိ ရွေးထားတဲ့ folder ရယ်။ သူ့အထဲက folder နဲ့ file တွေကိုပဲ ပြောင်းပေးပြီး အတွင်းထဲက folder ထဲကို ဆက်မဝင်တော့ပါဘူး။ ရွေးထားတဲ့ folder ထဲမှာ ရှိသမျှ အကုန်ပြောင်းချင်ရင်တော့ Level0ရွေးပေးပါ။ နောက်ဆုံး ပြောင်းထားတဲ့ ဖိုင်မှန်သမျှကို Undo Redo လုပ်ခွင့် ပေးထားပါတယ်။ ၃။ MP3er ကတော့ MP3 ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ tag တွေကို ZG to Uni ပြောင်းပေးဖို့ပါ။ Add folder နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Music folder ကို ထည့်လိုက်ရင် ရှိသမ
နှမ်းပဲကြဲကြဲ ၊ မြေပဲ ပဲ ကြဲကြဲ ကြောင်းဆွဲ နဲ့ ပက်ကြဲ နှစ်မျိုး ရှိတယ် ။ ပက်ကြဲ ဆိုတာ နွေထယ်ထရေးပြင်ပေါ်မှာ မိုးသားက လုံလောက်အောင် မရွာ ၊ ထွန် လို့ ဆွ လို့က မဖြစ် ။ လုပ်အား နဲ့ နွားက မလုံလောက် ဖြစ်လာတဲ့ အခါ စိုနိုင်သမျှ မြေသားပေါ် မျိုးစေ့ကို ပက်ကြဲချ လိုက်တာပေါ့ ။ ပေါက်ချင်သလို ပေါက်မယ် ။ အစီအစဉ် ကျ ချင်မှ ကျမယ် ။ ဒါပေမဲ့ မြေလှန်မထွန် ကြောင်းမဆွဲခဲ့တဲ့ အတွက် ရှိစုမဲ့စု အစိုဓာတ်ကလေးကို ထိန်းပြီး အစို့ အညှောင့် ထွက်ချိန်ရတယ် ။ အပင်ဖြစ် မြန်တယ် ။ ချက်ကောင်းတည့်ရင် ရတာပဲ ။ ဒါပေမဲ့ နောက်က လိုက်ရတဲ့ အဆင့်တွေ ပေါင်းသင်မယ် ၊ မြေသြဇာကျွေးမယ် ၊ သီးညှပ်ခွဲမယ် ၊ ပိုးသတ်ချင်တယ် ၊ ရောဂါကုမယ် ဆို အလုပ်မဖြစ်တော့ ။ သီးနှံ ပြန်သိမ်းတော့ အဆိုးဆုံး ။ ပေါက်ချင်သလိုပေါက်နေတဲ့ အပင်တွေကိုး။ ကြောင်းဆွဲ ကြဲဖို့ရာ ဆိုတာ မြေကို အသေအချာ ပြင်ရတယ် ။ တယ်ထရေးကို မှုန်နေအောင် ခံရတယ် ။ မိုးရေ လည်း ၀အောင် စုပ်ရပါမှ ။ ကြောင်းဆွဲတယ် ဆိုတာလည်း ဖြစ်ကတတ်ဆန်းမရ ၊ ကောင်းကင်ကနေ ဒရုန်းနဲ့ ကြည့်ရင် ဖြူးဖြောင့်နေတဲ့ မျဉ်းပြိုင်လေးတွေ ရအောင် နွားနဲ့လူနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ လုပ်ရတာ ။ ထွန်သွား ၊ ထွန်တံကောင်းကောင်း လည်းလိုသေး ။
ဒီရက်ပိုင်း ယူနီကုဒ်ကို လူတော်တော်များများ စိတ်ဝင်စားလာကြပြီး ထောက်ပြဝေဖန်မေးမြန်းတာတွေ ရှိတဲ့အထဲမှာ ညီလင်းဆက်ရေးခဲ့တဲ့ Review on Myanmar Unicode 5.1 & Suggestion ကို ပြတဲ့ပြီး ဒါတွေရှင်းပြီးပြီလားလို့ မေးတဲ့လူတွေ ရှိလာလို့ ဒီစာကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ပညာရှင်တွေ၊ Developer တွေက ကိုယ်စီ ရှင်းထားကြပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်တာရယ်၊ မြန်မာလိုရေးထားတာဆိုရင်လည်း တစ်စုတစ်စည်းတည်း မရှိတာကြောင့် တစ်နေရာတည်းမှာ စုစည်းပြီး ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ .:: Download this article in PDF format here ::.
Kindle Paper White နဲ့ စာဖတ်တဲ့ အခါမှာ တစ်ခါတစ်လေ မသိတဲ့ စာလုံးတွေကို Kindle မှာ ပါတဲ့ Oxford English To English ကို အသုံးပြုဖြစ်တာ များတယ်။ သို့ပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က စာဖတ်ရင်းနဲ့ Ornagai Dictionay ရရင် ပိုကောင်းမှာပဲ လို့ စဉ်းစားမိပြီး ဒီအပတ်မှာ Kindle ကို Custom Dictionary support လုပ်မလုပ် ရှာကြည့်ဖြစ်တယ်။ ကံကောင်းတာက Kindle က custom dictionary အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ Unicode font ပါပြီးသား ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် font ပြဿနာ မရှိဘူး။ သို့ပေမယ့် Unicode Rendering အလုပ်မလုပ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် တဝေထိုး ၊ ရရစ် ၊ ပက်ဆင့် စတာတွေကို ကောင်းကောင်း မပေါ်ဘူး။ သို့ပေမယ့်လည်း စာလုံးတွေကို မှန်းပြီးတော့ ဖတ်လို့ ရတဲ့ အတွက် အဆိုးကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Ornagai ကို Kindle မှာ အသုံးပြုချင်ရင်တော့ Ornagai.mobi ကို Download ချပါ။ ပြီးရင် Kindle ကို Computer နဲ့ ချိတ်။ documents > dictionaries အောက်မှာ Ornagai.mobi ကို ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Kindle က Settings > Device Options > Language and Dictionaries > Dictionaries > English > Ornagai ကို ရွေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ Kindle မှာ
အမှန်ပြောရရင် အခုထိ မြန်မာလက်ကွက် ( Zawgyi & Unicode ) တစ်ခုမှ သေချာ ( any OS, Window, Linux, Mac ) မရိုက်တက်ပါဘူး။ :D ကွန်ပျူတာကို စသုံးခါစတုန်းက မြန်မာစာရိုက်တာဟာ ကျွန်တော့်အတွက် တကယ့် အခက်အခဲကြီးတစ်ခုပါပဲ။ အဲ့ဒီအခက်အခဲကို ကျော်ဖြတ်ပေးလိုက်တာက ဝိဇ္ဇာ ပါ။ Burglish ရိုက်နေကျ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ တကယ့်ကို ကောင်းတဲ့ စာရိုက်စနစ်ပါပဲ။ ခုတော့ development က ရပ်သွားပါပြီ။ ရပ်သွားပေမယ့်လည်း Window မှာက အဆင်ပြေနေပါသေးတယ်။ Ubuntu မှက ရတယ်လို့တော့ ပြောပေမယ့် ကျွန်တော် မလုပ်တတ်လို့လား မသိ။ ခုထိ မရဘူး :D Source https://github.com/yathit/waitzar Stable version က 1.8 ပါ။ Nightly အနေနဲ့ 1.84 ထိထွက်ထားပါတယ်။ အပေါ်က git မှာ ယူလို့ရပါတယ်။